Kushaya basa, dambudziko rinotyisa muItari | Ehupfumi Zvemari
Jose Manuel Vargas chinobata mufananidzo | | Basa
El dambudziko rekushaya basa ndiro dambudziko guru rakatarisana nehurumende yezvino yeItaly. Pakati pekumira kwehupfumi kuri kutarisana nenyika mazuva ano, huwandu hwekushaikwa kwemabasa hunosimudzira ruzha. Mukota yekutanga ya2014 mwero wekushaikwa kwemabasa watosvika 13,6%, vakanyanya kutapurwa vari vechidiki vari pakati pemakore gumi nemashanu kusvika makumi maviri nemana. Muchikamu chekupedzisira, kushaya mabasa kwakamira pa15%.
Hurumende yeMutungamiriri, Matteo Renzi, yakapihwa mwedzi wapfuura shanduko yevashandi kudzikisira huwandu hwemabasa nekusvitsa mukana wakakura pabasa renguva pfupi. Mutemo uyu une tarisiro yekuvandudza mutemo wakadzikwa makore maviri apfuura pasi pehurumende yaMario Monti.
Muna Kubvumbi 2013, Monti yakatsiviwa naEnrico Letta, uye mukutanga kwa2014 Renzi akasvika. Ivo vese vakatsanangura kushaya basa sedambudziko rakakomba rakatarisana neItari. Nekudaro, matanho akatorwa kusvika pari zvino nehurumende dzadzo kusimudzira basa haana kupa zvibereko zvaidiwa.
Nyanzvi dzemuno dzakatosimbisa pane akati wandei kuti zvikonzero nei chikamu chikuru chevagari vemuItaly vasiri pabasa hachisi nyore sekuwanikwa mumitemo yevashandi. Midzi yawo inomhanya zvakadzika kupfuura zvinoita vezvematongerwo enyika veItaly.
Chikamu che kushaya mabasa muItari inobata pamusoro pezvose kune hupfumi husina kusimba huri kushushikana vashandi. Pasina kuenda kumberi, izvo zvichangoburwa zvishoma zviratidzo zvekuvandudza hupfumi, kusanganisira kuwedzera kweiyo mutengi kuvimba index muna Chivabvu apfuura, haisati yaguma nekuderera kwekushaya mabasa.
GDP muItaly yakadonha ne0,1% mukota yechitatu yegore rapfuura, mushure maizvozvo yakakura ne0,1% mukota inotevera uye yadonha zvakare ne0,1% kutanga kwa2014. Kudzikira uku kunokonzera, pakati pezvimwe zvinhu, kuti hapana anogona tsvaga mhinduro yemashiripiti kupedza kushaikwa kwemabasa. Kukura kwehupfumi kwakanyanya kusimba, saka ikozvino izvo zvinodikanwa kupa kupa kutsva kutsva munguva pfupi.
El hurumende yaMatteo Renzi yakagadzira chirongwa chekuda kugadzirisa shanduko kumutsiridza hupfumi. Ikozvino kune njodzi huru yekuti ichi chishuwo chitsva hachizokwanisa kumisa kubuda kweropa kwekushaiwa basa. Kana chimiro chikaenderera padanho iri, na2020 inofungidzirwa kuti mwero wekushaikwa kwemabasa ungatove wave kutenderera 37% Njodzi chaiyo.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ehupfumi Zvemari » General hupfumi » Basa » Urovha, iro dambudziko hombe muItari
Makambani ekunze kuSpain ane tarisiro nezve hupfumi hwenyika